DOCUMENTARIES Archives - Pejy 2 amin'ny 12 - Fisandratana Afrikhepri
Fifandraisana Sokajy fanadihadiana
Na dia mijanona ho materialista aza ny siansa mahazatra, misy mpahay siansa marobe manohana sy mamolavola paradigma mifototra amin'ny maha-voalohany ny fahatsiarovan-tena. Dokotera Amit Goswami ...
Ny lakilen'ny fanasitranana - fanadihadiana (2019)
Sarimihetsika sarimihetsika sy fifampidinihana manokana miaraka amin'ireo manam-pahaizana 18 lehibe indrindra amin'ny fifandraisana eo amin'ny vatana sy ny saina hahitana ny lalan'ny fahasalamana. Manana ny ...
2040 - Documentary (2020)
Nanontany momba ny ho avin'ny zanakay i Damon Gameau: Hanao ahoana ny hoavin'izy ireo amin'ny 2040 raha toa ka naka vahaolana tsotra efa vonona amin'ny fitsaboana ...
Trano - Documentary (2009)
Food Inc - Documentary (2009)
Ity fanadihadiana ity dia manaparitaka ny fiasan'ny indostria izay manova ny tontolo iainantsika sy ny fahasalamantsika isan'andro. Manomboka amin'ny tanimbary midadasika ka hatrany amin'ny talantalana fivarotana lehibe, amin'ny alàlan'ny trano famonoana ...
Fiainana mainty, Afrikana-amerikanina: ny tolona - Documentary (2019)
Dimampolo taona taorian'ny fahafatesan'i Martin Luther King, ny tanàna amerikana sasany dia mbola miatrika fizarazarana ara-poko. Ny lovan'ny fisarahana dia mbola tsapa any amin'ny tanàna ...
Ny rindrina maitso lehibe - Documentary (2020)
Tetikasa fatra-paniry laza izy io mba hampitombo rindrina hazo 8 km mipaka hatrany Senegaly ka hatrany Etiopia. Ity fehikibo ity dia tsy maintsy miady amin'ny fanafoanana ny toerana misy ny faritra noho ny ...
Watch Michael Jackson - Ity no izy (2009)
Ity fanadihadiana ity dia misy sary avy amin'ny famerenana farany nataon'i Michael Jackson.
Tyson - Documentary (2009)
Ity fanadihadiana ity dia mampiseho an'i Mike Tyson toa mbola tsy nahita azy ianao. Mike Tyson dia mamantatra ny asany amin'ny rakitsary arisiva. Ny atleta dia miherika mijery ny fahazazany sarotra sy ny fiakarany matihanina ...
Miroborobo - Documentary (2012)
Ity horonantsary fanadihadiana ity dia miavaka.
Hijery maimaimpoana Angela (2013)
Jereo angela maimaim-poana.
Ny fikasana dia mitaona ny raharaha - Documentary (2016)
Epigenetics dia fifehezana ny biolojika izay mandalina ny mekanika molekiola izay manova ny fitenenana ny lova lova arakaraka ny zava-misy. Raha ny génétika dia ny fandinihana ny ...
Mametraha lahatsoratra eo amin'ny lampihazo kolontsaina Afrikhepri
Afrikhepri dia sehatra ara-kolontsaina iray ampiasain'ny besinimaro hizarana fahalalana. Tsy miasa ho tombontsoan'ny vondron'olona vitsivitsy izy io, fa ho an'ny tombontsoan'ny besinimaro. Izany dia natao ho an'ny ...
Tonga mpandray anjara
Tsindrio ny kisary iray handefasana lahatsoratra
Mpanao gazety, profesora, siansa, atiny, mpanoratra, bilaogera, azonao atao ny mandefa ny lahatsoratrao eto.
Mpandray anjara vao haingana
Azo antoka ve fa sokafana ity lahatsoratra ity?
Mamaha ny ankavia: 0
Tena tianao ve ny hanafoana ny famandrihana?